Iprofayile yenkampani-Rech Chemical Co Ltd.
I-Rech Chemical Co Ltd yasekwa ngo-1991 njengenkampani egxila ekuveliseni nasasazeni imveliso yezinto, ezibandakanya izinto zokwenza imveliso, ukutya kwezityalo, impilo yezilwanyana. Okwangoku, i-Rech Chemical ikhule yangumboneleli omkhulu we-sulphate mono granular.
I-Rech Chemical Co. Ltd iphuhlise yaba ngumenzi ophambili wento e-China. Sisebenza ishishini lehlabathi liphela kunye nenkonzo epheleleyo kunye nolungiselelo. Injongo yethu kukubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu ukuphucula impilo kunye nokusebenza kwezilwanyana nezityalo.
I-Rech Chemical Co Ltd yinkampani enobuntu kakhulu kwaye iyakholelwa ekwakheni ubudlelwane obude kunye nabathengi bethu ngokubonelela ngenkonzo ekhethekileyo yabathengi onokuyithemba kwaye uthembele kuyo.